တွစ်တာရဲ့ကြီးထွားမှုကအရေးကြီးသလား။ | Martech Zone
သောကြာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 9, 2009 တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ4ရက်၊ 2013 ခုနှစ် Douglas Karr
Twitter သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးစာရင်းတွင်ကျိန်းသေဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းကိုနှစ်သက်သည် ဘက်ပေါင်းစုံ tools တွေနှင့်၎င်းမှကမ်းလှမ်းသောဆက်သွယ်ရေးပုံစံကိုနှစ်သက်သည်။ ၎င်းသည်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်နှင့်မြန်ဆန်သည်။ Mashable ၌ကြီးစွာသော post ရှိသည် တွစ်တာရဲ့တိုးတက်မှု၊ ၇၅၂%။ ဆိုက်တွင်တိုးတက်မှုသည်သူတို့၏ API မှတဆင့်ကြီးထွားမှုမပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းသည်အမှန်တကယ်ပိုကြီးသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုသောကုမ္ပဏီများသည်တွစ်တာကို၎င်းတို့၏ကြားခံနေရာများတွင်ထည့်သွင်းဖော်ပြသင့်သည်။ သို့သော်တွစ်တာသည်စျေးကွက်သမားများအတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုသမုဒ္ဒရာထဲတွင်ငါးသေးသေးလေးတစ်ခုဖြစ်နေဆဲပင်။ အနီးကပ်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်ဆိုအလတ်စား၏ဝိသေသလက္ခဏာသုံးခုမှာ:
လက်လှမ်းမမီ - အလတ်စားမှတဆင့်ရောက်ရှိနိုင်သည့်သုံးစွဲသူများ၏စုစုပေါင်းပမာဏကားအဘယ်နည်း။
နေရာချထား - စာတိုပေးပို့စနစ်သည်စားသုံးသူမှတိုက်ရိုက်ဖတ်သလား။
ရည်ရွယ်ချက် - စားသုံးသူများ၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား။
အင်တာနက်ပေါ်ရှိလူအများစုကအသစ်အဆန်းများကိုပြောဆိုရန်ကိုနှစ်သက်ကြပြီးလူတိုင်းကနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးသို့ပြေးရန်မျှော်လင့်ကြသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မူလယ်မြေကိုအခြားနည်းဖြင့်အလောင်းအစားမပြုမီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအချို့ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤတွင်၏စုံတွဲတစ်တွဲလည်ပတ်မှုဇယားနှင့်စာမျက်နှာ၏မြင်ကွင်းများ Google, Facebook က နှင့် တွစ်တာ။ Google သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Facebook ဟာလူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Twitter ဟာ micro-blogging ပလက်ဖောင်းတခုဖြစ်တယ်။
ရှေးရှေးနေစဉ် Facebook အကြောင်းပြောရတာကိုနှစ်သက်တယ်နှင့် Facebook သည်၎င်း၏ကြီးထွားမှုအကြောင်းပြောလိုသည်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်အသင်း ၀ င်မှုတိုးတက်မှုသည်သုံးစွဲသူများ၏ထိတွေ့မှုနှင့်မကိုက်ညီပါ အမှန်မှာ၊ စာရင်းဇယားများကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်အတွက်၎င်း၏အသင်း ၀ င်အခြေခံကိုဆက်လက်ကြီးထွားရန်လိုအပ်ကြောင်းပြသသည်။ သူတို့မှာဆိုးဆိုးရွားရွားယိုယွင်းနေတဲ့တည့်တည့်ဆီရှိတယ်။ ဘယ်သူမှဒီအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။
တွစ်တာဖြေ - နေရာချထားတယ်၊ လက်လှမ်းမီတယ်
တနည်းအားဖြင့် Search Engines - အထူးသဖြင့်ဂူဂဲလ်သည်သင်မှန်မှန်ကန်ကန်ပရိသတ်ကိုရောက်ရှိလိုလျှင်အရေးကြီးသောအရာများဖြစ်သည် (သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောရှာဖွေမှုများလား။ ) တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်နေရာချထားမှုကိုပေးသည် (တိုက်ရိုက် = အော်ဂဲနစ်ရလဒ်များ၊ သွယ်ဝိုက် = လစာ) ကလစ်တစ်ချက်နှုန်းလျှင်) နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ် (အသုံးပြုသူရှာဖွေနေခဲ့သည် သငျသညျ).
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်စျေးကွက်ဝေစုကိုဖမ်းယူရန်သင်အာရုံစိုက်သည် ရ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များပါဝင်သည်။ သူတို့ရဲ့ Blogging angel ၀ ံဂေလိလုပ်ငန်း ၀ န်ကြီးဌာနရဲ့ဒုဥက္ကPresident္ဌအနေနဲ့ခင်ဗျားကိုမညွှန်ပြရင်ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေခြင်းမှတစ်ဆင့်ခဲများကိုဖမ်းယူရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောဖြေရှင်းနည်း.
Tags: တွစ်တာtwitter တိုးတက်မှု
ဇန်နဝါရီ 10, 2009 မှာ 11: 32 AM
အကယ်၍ သင်၏ပစ်မှတ်ပရိသတ်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မြို့ကြီးတိုင်းရှိ ဆိုရှယ်မီဒီယာကို ထောက်ခံအားပေးသူများဖြစ်ပါက၊ twitter သည် သွားရမည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ပရိုတိုကော (အတွေးများ၊ စိတ်ကူးများ၊ ဂီတ၊ သမိုင်း၊ အနုပညာစသည်ဖြင့်) အပါအဝင် အင်တာနက်ပရိုတိုကောမှ ရောင်းချနိုင်သည့် မည်သည့်အရာမဆို အလင်းအလျင်ဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လူတစ်ဘီလီယံအထိ အလားအလာရှိသော ပရိသတ်အရွယ်အစားရှိမည်ဖြစ်သည်။
အန္တာတိကမှလွဲ၍ တိုက်တိုင်းမှ နောက်လိုက်များရှိသည်။ အဲဒါက twitter ရဲ့ အကြီးမားဆုံး ရောင်းအားလို့ မထင်ဘူးလား။ ၎င်းသည် အခမဲ့ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ဇန်နဝါရီ 10, 2009 မှာ 11: 38 AM
မည်သူ့ကိုမဆို Twitter အသုံးပြုခြင်းမှ တွန်းလှန်ရန် ငါသည် နောက်ဆုံးလူဖြစ်မည်။ 🙂 အကယ်၍ သင်၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်သည် Twitter သည် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့် ပြောင်းလဲမှုများသည် မည်သည့်နေရာဖြစ်သည်ကို ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သည်ဆိုပါက - ထို့နောက် ၎င်းကို သွားပါ။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွေက သူတို့အတွက် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အရာတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် လူအများစုက မှုန်ဝါးနေလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည် သင်လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာ သို့မဟုတ် ရှိသည်များကို ရှာဖွေနေသူများနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပေးသည်။ Twitter သည် တိုက်ရိုက်မဟုတ်ပါ... သင့်အား ရှာဖွေရန်နှင့် သင်နှင့် ချိတ်ဆက်ရန် လူအများက အလုပ်အနည်းငယ် လိုအပ်ပါသည်။
Amy မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လာမည့် Tweetup တွင် မင်းကို တွေ့ရဖို့ စောင့်မျှော်နေပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ 13, 2009 မှာ 2: 54 AM
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ twitter နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အရာတွေကို နှစ်သက်ပေမဲ့ အဲဒါကို မသုံးနိုင်ဘဲ ဗိုက်ဆာလို့ တစ်ယောက်တည်းတော့ မထင်ပါဘူး။ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်တာ ဒါမှမဟုတ် ကော်ဖီသွားဝယ်မယ့် အဒေါ် Betsy ရဲ့ ခွေးလှည့်ကွက်တွေအကြောင်း ကြားချင်တာထက် ကော်ဖီသွားဝယ်မယ့် လူအုပ်စုကြီးကို ပြောပြဖို့ လုံးဝမတိုက်တွန်းပါဘူး။
အလုပ်များနေတယ်၊ ​​အတိုအထွာတွေဖတ်မယ့်အစား ဒီလို ကောင်းတဲ့ ဘလော့ဂ်အများစုကို ဖတ်ပြီး အဲဒီနည်းနဲ့ ကြိုက်ပါတယ်။
Google နဲ့ Facebook နှစ်ခုလုံးက Twitter-mania ကို တည်ထောင်သူမဟုတ်တဲ့အတွက် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကန်နေကြတာကို ထပ်ဖြည့်ပြောချင်ပါတယ်။ ဒါတင်မကဘဲ ယာဉ်ကြောအသွားအလာ ပမာဏကလည်း လမ်းကြောင်းပါဝင်ပတ်သက်မှုလောက် အရေးမကြီးပါဘူး။ ရိုးရှင်းသောပရောဂျက်များပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်အလုပ်မလုပ်သောအခါတွင် ကျွန်ုပ်သည် ဖောက်သည်များအတွက် တွဲဖက်ဆက်စပ်ဆိုက်များကို တည်ဆောက်နေပြီး အလွန်တက်ကြွပြီး ပြောင်းလဲနေသော အသွားအလာပမာဏ အနည်းငယ်ကို ပိုနှစ်သက်ပါသည်။
Google နဲ့ Facebook နှစ်ခုစလုံးက Twitter အိုင်ဒီယာထဲမှာ ရွှေငန်းတစ်ကောင်ကို လွတ်သွားသလို ခံစားရတယ်။